Akụkọ - Amụma ọnụahịa nchara maka Ọgọst 2021: mbubata na ịrịọ arịrịọ nhazi njikarịcha n'akụkụ dị ike
Amụma ọnụahịa nchara maka Ọgọst 2021: mbubata na ịrịọ arịrịọ nhazi njikarịcha ọnụahịa dị n'akụkụ siri ike
Okwu a na -elele.
Keywords: mmachibido imepụta ihe iji belata ọdọ mmiri nke nkwụghachi azụ nke akụrụngwa
Ntuziaka mbipụta a.
Review Nyocha ahịa: ọnụ ahịa rịrị elu nke ukwuu n'ihi mmụba dị mma sitere na mgbochi mgbochi.
Analysis Nyocha ọkọnọ: Nweta na -aga n'ihu na -eme nkwekọrịta, ngwa ahịa na -atụgharịkwa site na ibili na ịda.
Analysis Nnyocha nyocha: oke okpomọkụ na mmetụta mmiri ozuzo, arụmọrụ chọrọ adịghị ike.
Analysis Nyocha ego: akụrụngwa ndị ahụ dara, nkwado ọnụ ahịa ahụ adaala.
Nyocha Macro: amụma nkwalite kwụsiri ike anaghị agbanwe agbanwe, ụlọ ọrụ na -etolitekwa nke ọma.
Echiche zuru oke: N'ọnwa Julaị, site na nkwalite mba niile na akụkọ mmachi imepụta, ọnụ ahịa nchara ụlọ na -ebute usoro mgbanwe. N'ime oge ahụ, ozi ọma na-apụta ugboro ugboro, mmejuputa mmejuputa nke iwetulata ala; mmetụta ntule kpụ ọkụ n'ọnụ ọzọ, ahịa ọdịnihu siri ike; n'okpuru atụmanya nke mbelata nrụpụta, igwe igwe igwe na-akwalite ọnụ ahịa ụlọ ọrụ ochie. Ọnụ ahịa nchara bilitere n'oge ezumike, karịa ka a tụrụ anya ya, ọkachasị n'ihi amụma nke mbenata nrụpụta nchara nchara n'ọtụtụ ebe otu oge, ụfọdụ ụlọ ọrụ nchara malitere ibelata mmepụta, nrụpụta ọkọnọ iji mee ka ọ dị mfe mgbe ahịa isi obodo gasịrị. ife. Agbanyeghị, yana ọnụ ahịa na -aga n'ihu na -arị elu, arụmọrụ siri ike na -achọkarị adịghị ike, na oke okpomọkụ na ihu igwe mmiri ozuzo, a na -egbochi nrụpụta ọrụ injinịa, ntụgharị ọnụ na -ada ada nke ukwuu ma e jiri ya tụnyere ọnwa gara aga. Inye na ihe na -achọkarị na -ebelata n'ike abụọ, na ikpe anyị n'ọnwa gara aga bụ otu ihe ahụ, mana ahịa isi obodo na -ebuli mmụba a na -enweghị oke, na -eme ka esemokwu dị n'ahịa ahụ ka njọ. N'ozuzu, n'ime ọnwa Julaị niile, a tụrụ anya ịrị elu ahụ, ma gosipụta ọrụ nke isi ego. Mgbe ịbanyechara n'ọnwa Ọgọstụ, usoro nnweta ụzọ abụọ na mgbachi arịrịọ ga-agbanwe: n'akụkụ ọkọnọ, n'ihi ọrụ siri ike nke ịpịpụta mmepụta, mpaghara ụfọdụ ga-aga n'ihu na-agbasawanye mmachibido mmepụta, mmepụta siri ike ịlọghachite; n'akụkụ a na -achọ, site na enyemaka nke oke ihu igwe, a na -atụ anya na agụụ na -egbu oge ga -agbake. Ya mere, anyị na -ebu amụma na n'ọnwa Ọgọst, a ga -eme ka nrụpụta nchara ụlọ na ihe achọrọ dị mma, ọnụ ahịa nchara na inertia elu. Agbanyeghị, site na mmụba na mmachi mmepụta, igwe igwe na -adịbeghị anya, iberibe na ọnụ ahịa akụrụngwa ndị ọzọ adaala ruo n'ókè ụfọdụ, a na -atụ anya na etiti igwe ndọda ga -agbada, mmụba nke uru mgbe ike mmachi mmepụta ma ọ bụ adịghị ike (nchara ọkụ eletrik adịghị na mgbochi nrụpụta nhazi). Tụkwasị na nke ahụ, ụfọdụ ngwaahịa ngwaahịa mbupụ ụtụ isi mmezi amụma ga -ebelata ọnụ ọgụgụ nke mbupụ nchara na China, mmụba nke ụkpụrụ ala na ụlọ, ga -emetụta ngụkọta nke ntọhapụ chọrọ ala. A na-atụ anya na ọnụahịa rebar dị elu na Shanghai n'ọnwa Ọgọstụ (dabere na Xiben index) ga-adị n'etiti 5,500-5,800 yuan/ton.
Nyochaa: Ọnụ ahịa nchara rịrị elu na July
I. Nyocha ahịa
N'ọnwa Julaị 2021, ọnụ ahịa nchara ụlọ rịrị elu nke ukwuu, ka ọnwa Julaị 30, Westbourne Steel Index mechiri na 5570, gbagoro 480 site na njedebe nke ọnwa gara aga.
Review nke July, ọ bụ ezie na omenala chọrọ anya-oge, ma anụ ụlọ ewu nchara ahịa counter-emekarị elu, ihe kpatara ya, tumadi n'ihi na amụma n'akụkụ na-ịnọgide rụrụ, ahịa na-atụ anya ga-adị mma. Kpọmkwem, na ọkara mbụ nke afọ, na mwepụta nke mmachi mmachi na ntule ahịa nke mmụọ na -akwalite, ọnụahịa ụlọ nchara ụlọ dị elu karịa; n'etiti, igwe ihe igwe na-akwalite ọnụ ahịa ụlọ ọrụ ochie, ahịa dị n'akụkụ nhazi njikọ, ọnụ ahịa na-abawanye ka ịgbasawanye; mbubreyo, na oke okpomoku gburugburu mmiri ozuzo na mpaghara ụfọdụ n'okpuru mmetụta nke ajọ ifufe, a na -egbochi iwu ọrụ, ntọhapụ nke chọrọ ọnụ adịghị ezu, mmụba ọnụ ahịa belatara. N'ozuzu, n'ihi na a na -atụ anya na ntinye nke mbubata ga -aga n'ihu na -ewusi ike, ahịa isi obodo nwere nkwalite dị ukwuu na ọnụahịa ntụpọ, nke mechara bute ọnụ ahịa nchara ụlọ na July karịrị atụmanya elu.
Ọnụ ahịa nchara ụlọ a na -eme na July mgbe nnukwu nkwalite dị elu, ahịa Ọgọstụ ma ahịa a na -aga n'ihu? Kedu mgbanwe ga -eme na ntọala ụlọ ọrụ? Na ọtụtụ ajụjụ, yana akụkọ nyocha ụlọ ahịa nchara ụlọ nke August.
Ee, nyocha ọkọnọ
1, nyocha ihe nchara nchara ụlọ nke ọnọdụ dị ugbu a
N'ihe dị ka ọnwa Julaị 30, ngụkọta nke ụdị nchara dị n'ụlọ bụ tọn 15,481,400, elu 794,000 ma ọ bụ 5.4% site na njedebe nke June, na gbada 247,500 tọn ma ọ bụ 1.6% site n'otu oge n'afọ gara aga. N'ime ha, ihe ndị e mepụtara na eri, mkpanaka waya, mpịakọta na -ekpo ọkụ, akpọrepu oyi na efere ọkara bụ tọn 8,355,700, tọn 1,651,100, tọn 2,996,800, tọn 1,119,800 na tọn 1,286,000 n'otu n'otu. Na mgbakwunye na ntakịrị mbelata na ebuka akpọchiri akpọrọ, ihe nrụpụta nke ụdị nchara ise ndị ọzọ bilitere ruo n'ókè ụfọdụ, mana ọ bụghị nke ukwuu.
Dabere na nyocha data, n'ọnwa Julaị, ọkọnọ ahịa ahịa nchara ụlọ na -achọ okpukpu abụọ. Akụkụ chọrọ: ihe ndị na-apụ apụ na-emetụta oge, arụmọrụ chọrọ ọnụ dị nwayọ, gburugburu olu azụmahịa dara nke ukwuu ma e jiri ya tụnyere June, mana ọchịchọ ịkọ ahịa dị mma. Akụkụ ọkọnọ: Mgbe atumatu mkpochapụ nrụpụta nchara na mpaghara na obodo ụfọdụ, mbelata ọkọnọ ga -adị ike. N'iburu n'uche na mmachi nrụpụta ka ga -abawanye n'ihu mgbe ọ banyere n'August, ebe a na -atụ anya ịrụ ọrụ chọrọ ka ọ ka mma, nke a na -atụ anya na a ga -agbaze ngwa ahịa ya.
2, nyocha ọnọdụ ọkọnọ ụlọ
Dabere na data ọhụrụ sitere na China Steel Association, n'etiti ọnwa Julaị 2021, ụlọ ọrụ nchara ọnụ ọgụgụ rụpụtara mkpokọta nchara 21,936,900 nke nchara nchara, tọn 19,089,000 nke ígwè ezì, tọn 212,681,000. Nkezi mmepụta kwa ụbọchị n'ime afọ iri a, nchara 2,193,700 dị nchara, mmụba nke 2.62% ringgit na 2.59% kwa afọ; iron ezì 1,908,900 tọn, mmụba nke 2.63% ringgit na mbelata nke 0.01% kwa afọ; nchara 2,126,800 tọn, mmụba nke ringgit 8.35% na 4.29% kwa afọ.
3, nyocha ụlọ nbata na mbupụ ọnọdụ ọnọdụ
Dabere na nchịkwa nchịkwa nke kọstọm na -egosi na n'ọnwa June 2021, China butere nde tọn ígwè dị nde 6.458, mmụba nke nde tọn 1.1870, ma ọ bụ 22.52%; uto nke afọ 74.5%; Mgbakọ Jenụwarị-June na mbupụ nchara 37.382 nde tọn, mmụba nke 30.2%. Mbubata nchara nke China 1.252 nde tọn na June, gbadara 33.4%; Mbubata mbubata mbubata nke Jenụwarị-June Site na Jenụwarị ruo June, China webatara ngụkọta nke tọn nchara 7.349 nde, nke ruru 0.1% kwa afọ.
4, atụmanya ọkọnọ nke nchara owuwu ọnwa na -abịa
N'ọnwa Julaị, n'okpuru iwu mbenata nrụpụta mba, e nyela ọtụtụ ebe iji belata ọrụ ahụ, ụfọdụ nrụgide ọkọnọ mpaghara dara ada nke ukwuu. Agbanyeghị, na ọnụ ahịa nchara dị elu nke ukwuu, a rụzigharịrị uru nchara, ọnụego mbubata ngwa ngwa na -adabaghị adaba. N'iburu n'uche na mgbe ịbanye n'August, mmachi mmepụta nhazi ga-abawanye n'ihu, mana mbelata mmepụta nke ahịa ga-agbada, anyị na-atụ anya na ntinye ụlọ nke ihe owuwu ụlọ n'August agaghị ada ada.
Otú ọ dị, ina ọnọdụ
1, Shanghai na -ewu nchara ahịa na -emekarị nyocha
N'ọnwa Julaị, ọchịchọ ọdụ ụgbọ ala dara site n'afọ gara aga. N'etiti ọnwa, n'okpuru mmetụta nke ihu igwe dị elu, mwepụta nke ọnụ ọnụ adịghị ike; na ọkara nke abụọ nke afọ, East China tara ahụhụ site na ajọ ifufe, mechiri ụlọ nkwakọba ihe ụfọdụ, na azụmaahịa ahịa mebiri. N'ozuzu, mmetụta apụtabeghị dị oke mkpa, ntụgharị ahụ dara nke ukwuu site na mgbanaka ahụ. Agbanyeghị, mgbe ị banyere n'August, a na -atụ anya na akụkụ a na -achọ ga -atụtụ ntakịrị: n'otu aka, akụkụ ego ahụ dịtụ nfe, a na -atụkwa anya na ọ ga -ewepụta ngwa ahụ dara n'oge gara aga. n'aka nke ọzọ, ihu igwe dị elu na -ebelata, a na -atụkwa anya na oriri mgbada ga -eto. Ya mere, ahịa nwere atụmanya ụfọdụ maka ihe a chọrọ n'August.
IV. Nyocha ego
1, nyocha ihe ọnụ ahịa akụrụngwa
N'ọnwa Julaị, ọnụ ahịa akụrụngwa dara n'otu akụkụ. Dabere na data nke Xiben New Trunk Line na-enyocha, dị ka ọnwa Julaị 30, ọnụ ahịa ụlọ ọrụ nke mkpokọta carbon nkịtị na mpaghara Tangshan bụ 5270 yuan/ton, elu 360 yuan/ton ma e jiri ya tụnyere ọnụahịa na njedebe nke ọnwa gara aga; ọnụ ahịa ihe mkpofu na mpaghara Jiangsu bụ 3720 yuan/ton, elu 80 yuan/ton ma e jiri ya tụnyere njedebe nke ọnwa gara aga; ọnụahịa coke nke abụọ na mpaghara Shanxi bụ 2440 yuan/ton, gbadara yuan/ton 120 ma e jiri ya tụnyere ọnụahịa na njedebe nke ọnwa gara aga; ọnụahịa nke ire ụtọ ọla 65-66 na mpaghara Tangshan bụ yuan 1600. Ọnụ ahịa igwe na-akpọ nkụ na mpaghara Tangshan bụ RMB1,600/ton, elu RMB50/ton ma e jiri ya tụnyere njedebe nke ọnwa gara aga; Ntọala 62% iron ore index bụ USD195/ton, gbada USD23.4/ton ma e jiri ya tụnyere njedebe nke ọnwa gara aga.
N'ọnwa a, mbelata nke ore dị na mbubata pụtara nke ọma, emezigharịla akụkụ uru nchara nchara.
2, a ga -atụ anya ọnụ ego ịkpụ nchara n'ọnwa na -abịa
Ọnọdụ zuru oke ugbu a na ọnọdụ chọrọ, anyị na -atụ anya: iron ga -ada mgbe e mesịrị; coke ọkọnọ siri ike, ọnụahịa ahụ welitere ntakịrị; iberibe nchara nchara site na mmachi mmepụta, mmachi ike, ọnụ ahịa ma ọ bụ nkwụghachi azụ dị elu. Echiche zuru oke, a ga -atụ anya na ọnụ ahịa nchara ụlọ ga -agbada ntakịrị na August.
V. Ozi igwe
1, usoro dị iche iche nke etiti na mpaghara “14 ise” ụzọ mbelata carbon arụ ọrụ doro anya
N'ọnọdụ oke ikuku carbon, nnọpụiche carbon, site na ministri ruo na mpaghara na-eme mgbanwe mgbanwe ọkụ na-acha obere carbon na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Onye nta akụkọ ahụ matara na a ga-ewepụta “Atụmatụ afọ nke iri na ise” maka mmepe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mmepụta ihe yana “atụmatụ afọ nke iri na anọ” maka mmepe nke ụlọ ọrụ akụrụngwa ngwa ngwa, ebe ngalaba ndị dị mkpa ga-ewepụta atụmatụ mmejuputa carbon maka ndị na-abụghị ferrous. ọla, ihe ndị e ji ewu ụlọ, ígwè na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị mkpa, na dokwuo anya mbelata carbon ụlọ ọrụ A ga-eme ka ụzọ mmejupụta ya pụta, mmepe nke ụlọ ọrụ ọhụrụ na ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu ga-adị ngwa ngwa, a ga-abawanye oke nke ike dị ọcha. . A na-ejikwa mpaghara arụ ọrụ iji zụlite ma na-eto ụlọ ọrụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, mee ngwa ngwa nke teknụzụ ozi ọgbọ ọhụrụ n'ichepụta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, wee mepụta ọtụtụ ogige ndụ ndụ na ụlọ ọrụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, wdg, iji mee ka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na obere carbon dị ngwa. -nkwalite ogo ụlọ ọrụ.
2, China welitere ụfọdụ ngwaahịa nchara ngwaahịa mbupụ, mkpochapụ nkwụghachi ego ụtụ maka ngwaahịa dị elu
Kọmịshọna Ọchịchị State Council kwupụtara na, iji kwalite mgbanwe na nkwalite nke ụlọ ọrụ nchara na mmepe dị elu, Kọmịshọna Ọchịchị State Council kpebiri ịbawanye ọnụahịa mbupụ nke ferrochrome na iron ezi dị ọcha site na August 1, 2021, mgbe ịhazigharị ọnụego ụtụ mbupụ nke 40% na 20%, n'otu n'otu. Na mgbakwunye, dị ka ọkwa nke Ministrị Ego na Nchịkwa Ọchịchị steeti nyere, site na August 1, 2021, China ga -akagbukwa mbelata ụtụ mbupụ na ụdị ngwaahịa nchara iri abụọ na atọ dị ka igwe nchara. Nke a bụ mmezi nke abụọ nke tarifụ nchara China kemgbe afọ a, mgbanwe mbụ nke tarifụ na Mee, na-ejigide nkwụghachi ụtụ nke mbupụ na-ekpuchi koodu ụtụ isi iri atọ na atọ nke nnukwu ngwaahịa agbakwunyere, oge a kagburu.
3, Jenụwarị-June ụlọ ọrụ mba na-ahụ maka nrụpụta mba dị elu karịa uru nwetara ịrị elu 66.9% kwa afọ
Site na Jenụwarị ruo June, n'ime nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe 41, ụlọ ọrụ 39 mụbara uru ha na-enweta kwa afọ, ụlọ ọrụ 1 gbanwere mfu ka ọ bụrụ uru, ụlọ ọrụ 1 ka na-adịkwa larịị. Uru ụlọ ọrụ dị mkpa bụ dị ka ndị a: nchara na-abụghị ọla na-agbaze ma na-arụgharị ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ngụkọta uru mụbara site na oge 2.73, ụlọ ọrụ na-ewepụta mmanụ na gas mụbara ugboro 2.49, ụlọ ọrụ na-agbaze igwe na-agbaze na ụlọ ọrụ nhazi na-abawanye ugboro 2.34, akụrụngwa kemịkal na Ụlọ ọrụ mmepụta ngwaahịa kemịkal na -abawanye ugboro 1.77, ebe a na -egwupụta coal na ụlọ ịsa ahụ mụbara site na oge 1.14, ụlọ ọrụ na -emepụta ụgbọ ala mụbara site na 45.2%, kọmpụta, nkwukọrịta na ụlọ ọrụ nrụpụta elektrọnik ndị ọzọ toro site na 45.2%, igwe eletriki na ụlọ ọrụ nrụpụta akụrụngwa toro site na 36.1 %, ụlọ ọrụ nrụpụta akụrụngwa izugbe toro site na 34.5%, ụlọ ọrụ nrụpụta akụrụngwa pụrụ iche toro site na 31.0%, ụlọ ọrụ na-ere ihe na-abụghị ọla nwere 26.7%, ọkụ eletrik, mmepụta okpomọkụ na ụlọ ọrụ ọkọnọ toro site na 9.5%.
, Ahịa mba ofesi
N'ọnwa June 2021, nrụpụta nchara nchara zuru ụwa ọnụ nke mba 64 gụnyere na ọnụ ọgụgụ World Steel Association bụ nde tọn 167.9, mmụba nke 11.6%.
Kpọmkwem, nrụpụta nchara nke China bụ tọn nde 93.9, nke ruru 1.5% n'afọ; Nrụpụta nchara nchara dị n'India bụ tọn nde 9.4, nke rịrị elu 21.4% kwa afọ; Nrụpụta nchara nchara dị na Japan bụ nde tọn 8.1, na-agbago 44.4% kwa afọ; Nrụpụta nchara nchara US dị nde tọn 7.1, gbagoro 44.4% kwa afọ; Ihe a na-eme atụmatụ na Russia na-emepụta nchara dị nde tọn 6.4, na-agbago 11.4% kwa afọ; Nrụpụta nchara siri ike nke South Korea bụ nde tọn 6, mmụba nke 17.35%; Germany mmepụta nchara dị nde tọn 3.4, mmụba nke 38.2%; Turkey crude ígwè mmepụta nke 3.4 nde tọn, mmụba nke 17.9%; Nrụpụta nchara nchara nke 3.1 nde nke Brazil, mmụba nke 45.2%; Iran na -amịpụta nchara ruru nde tọn 2.5, mmụba nke 1.9%.
VII. Echiche zuru oke
N'ọnwa Julaị, nkwalite mba na -akwalite ya, akụkọ mmachi mmachi, ọnụ ahịa nchara ụlọ na -ebute mmụba. N'ime oge ahụ, ozi ọma na-eme ugboro ugboro, mmejuputa mmejuputa nke iwetulata ala; mmetụta ntule ọzọ, ahịa ọdịnihu bilitere nke ọma; A na-atụ anya na mbelata mmepụta, igwe nchara na-akwalite ọnụ ahịa ụlọ ọrụ ochie. Ọnụ ahịa nchara bilitere n'oge ezumike, karịa ka a tụrụ anya ya, ọkachasị n'ihi amụma mbenata nrụpụta nchara dị n'ọtụtụ ebe n'otu oge, ụfọdụ ụlọ ọrụ nchara malitere ibelata mmepụta, nrụpụta ọkọnọ ka ọ dị mfe mgbe ahịa isi obodo gasịrị. ife. Agbanyeghị, ọnụ ahịa na -aga n'ihu na -arị elu, arụmọrụ siri ike na -achọkarị adịghị ike, na oke okpomọkụ na ihu igwe mmiri ozuzo, a na -egbochi ọrụ injinia, ọnụ ahịa azụmaahịa dara nke ukwuu ma e jiri ya tụnyere ọnwa gara aga. Nweta na ihe na -achọkarị na -akụda n'akụkụ abụọ, na ikpe anyị n'ọnwa gara aga bụ otu ihe ahụ, mana ahịa isi obodo na -ebuli mmụba a na -enweghị oke, na -eme ka esemokwu dị n'ahịa ahụ ka njọ. N'ozuzu, n'ime ọnwa Julaị niile, a tụrụ anya ịrị elu ahụ, ma gosipụta ọrụ nke isi ego. Mgbe ịbanyechara n'ọnwa Ọgọstụ, usoro ọkọnọ ụzọ abụọ na mgbachi arịrịọ ga-agbanwe: n'akụkụ ọkọnọ, n'ihi ọrụ siri ike nke ịpịpụta mmepụta, mpaghara ụfọdụ ga-aga n'ihu na-agbasa ọnụ ọgụgụ mmachi mmepụta, mmepụta siri ike ịlọghachite; n'akụkụ ihe a na -achọ, site na enyemaka nke oke ihu igwe, a na -atụ anya na agụụ na -egbu oge ga -agbake. Yabụ, anyị na -ebu amụma na n'ọnwa Ọgọst, a ga -eme ka nrụpụta nchara ụlọ na ihe achọrọ dị mma, ọnụ ahịa nchara na inertia elu. Agbanyeghị, site na mmụba nke mmachi mmepụta, igwe igwe na -adịbeghị anya, iberibe na ọnụ ahịa akụrụngwa ndị ọzọ adaala ruo n'ókè ụfọdụ, a na -atụ anya na etiti igwe ndọda ga -agbada, mmụba nke uru mgbe ike mmachi mmepụta ma ọ bụ adịghị ike (nchara ọkụ eletrik adịghị na mgbochi nrụpụta nhazi). Tụkwasị na nke ahụ, ụfọdụ ngwaahịa nrụpụta mbupụ ụtụ isi ngwaahịa mbupụ ga -ebelata ọnụ ọgụgụ nke mbupụ nchara na China, mmụba na nhazi ala na ụlọ, ga -emetụta ngwangwa nke mwepụta ihe dị n'okpuru ala.
A na-atụ anya na ọnụahịa rebar dị elu na Shanghai n'ọnwa Ọgọst ga-adị n'etiti 5,500-5,800 yuan/ton.